IMozambiki, uMzantsi Afrika, iCape Verde, iMorocco, iZambia ijoyine iBhodi yoLawulo ye-UNWTO
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » IMozambiki, uMzantsi Afrika, iCape Verde, iMorocco, iZambia ijoyine iBhodi yoLawulo ye-UNWTO
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zaseMozambiki • abantu
Ngolu lonyulo lweBhodi eLawulayo ye-UNWTO ilizwe lase-Afrika elilungu le-UNWTO linethemba lokuba linganegalelo ekubuyiseni i-Afrika kwi-post-COVID-19, ukuxhobisa uluntu lwasemaphandleni ukuba lwenze ukhenketho sisixhobo sokwenene sokuvelisa ubutyebi.
IMozambiki iphakathi kwamazwe amahlanu aqeshwe kwiBhodi yoLawulo ye-World Tourism Organisation kwisithuba sama-2021-2025.
Isibhengezo sokudityaniswa kweMozambiki senziwe ngexesha leNtlanganiso ye-64 yeKomishini yeNgingqi yoMbutho wezoKhenketho we-Afrika kwi-CAF / UNWTO kunye noHlelo lwesi-2 loKhenketho lweHlabathi lwe-OMT - iForam yoTyalo-mali e-Afrika, eSal Island, eKapa Verde, eyenzeka phakathi 2 kunye ne-4 Septemba 2021.
Ukongeza kokuqeshwa, le ntlanganiso yayijolise ekuxoxeni ngophuhliso lwezokhenketho kwingingqi ye-Afrika, izinto eziphambili ngokubaluleka ze-OMT kunye neendlela zomsebenzi.
IMozambiki yonyulwe kubantu abasixhenxe bebonke. Ke, amanye amazwe angamaLungu anyuliweyo aya kuthi amele i-Afrika kwiBhodi yesiGqeba se-OMT kangangesithuba se-2021-2025 nguMzantsi Afrika, iCape Verde, iMorocco neZambia.
INigeria neGhana zashiywa ngaphandle.
Ebekhona kule ntlanganiso, uMphathiswa weNkcubeko noKhenketho, u-Eldevina Materula, uthe “ngexesha apho sihlangabezana nenye yezona ngxaki zinzima kukhenketho lwehlabathi, le yenye yempumelelo enkulu esiyenzileyo kwaye izakusinceda ukukhulisa ukhenketho. Ikwayimpendulo kwinqanaba lelizwekazi kunye nokwamkelwa kwe-ajenda yaseMozambiki kuphuhliso lokhenketho lwaseAfrika. ”
Kuhambo oluya eCape Verde, uMaterula wayehamba noMlawuli Jikelele we-INATUR, uMarco Vaz dos Anjos, kunye noSekela Mlawuli weSizwe woCwangciso kunye neNtsebenziswano, u-Isabel da Silva.
Kufanele ukuba kuthiwe iBhunga elinoLawulo oluPhezulu (i-EC) liqumrhu le-WTO, elinomsebenzi wokuthatha amanyathelo afanelekileyo, ekuboniswene nawo nguNobhala Jikelele, ukuphumeza izigqibo kunye neengcebiso zeNdibano yeZizwe eziManyeneyo.
Intlanganiso ye-CAF yama-64, ephele ngoMgqibelo (4), yadibanisa abaphathiswa bezokhenketho baseAfrika, abameli be-OMT Secretariat, kubandakanya uNobhala-Jikelele we-OMT, uZurab Pololikashvili, kunye namaqabane kweli candelo. Iseshoni yavulwa nguMongameli weRiphabhlikhi yaseCape Verde, uJorge Carlos Fonseca.
Le ntlanganiso yonyaka ibonelela ngeqonga apho abachaphazelekayo kwicandelo likarhulumente nelabucala badibana ukuze babelane ngezimvo ngemeko yangoku ye-ajenda yophuhliso lokhenketho oluzinzileyo lwamazwe abo kunye noMmandla we-Afrika.
Umsebenzi weCAF kukuxhasa nokunceda amazwe angamalungu e-OMT kunye nabanye abathathi-nxaxheba kwingingqi kwiinzame zabo zokuphuhlisa indawo yezokhenketho njengesixhobo sophuhliso loqoqosho nolwezentlalo, ukuqinisekisa ukuba amalungu azuza ngokupheleleyo kwiinkonzo zombutho.